Calaamadda 2 ee Muuse: Sharciga - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Waan ku aragnay Calaamadda koowaad ee Muuse – Iiddii Kormaridda – Ilaah baa xukumay inay dhimasho u ahaato dhamaan curadkii marka laga reebo kuwa joogay guryihii halkaas oo neef baraar ah oo loo soo allabaryay oo dhiig rinji ah tiirarkooda lagu xardhay. Sidaas Fircoon ma gudbiyeen wiilkiisa dhintay halka Nebi Muuse (NNKH) hogaaminayo in reer binu Israa’iil Masar ka soo baxaan, iyo Fircoon ku maanshaynay hafasho biyeed halka ay ku raadjireer iyaga guud ahaan Badda Cas bartamaheeda.
Laakiin doorka Muuse nabi ahaantiisa ma’ahayn oo kaliya in uu iyaga u horseedi soo bixitaankooda dalkii Masar, laakiin sidoo kale si ugu hogaamiyo tusiyana jidka nolosha cusub – ku noolaadaan sidii sharciga waafaqsan ee uu Ilaaheey aasaasay.
Suurat Al- Aclaa (Suurat 87 – Ka Ugu Sareeya) waxay na xasuusunaysa sida Ilaahay u sameyeey inu aduunka u shaqeeyo sida sharciga Eebe dartiis.
Waynee Magaca Eebe ee Sarreeya. Eebaha abuuray khalqiga ekeeyayna. Eebaha wax walba qaddaray Jidkana tusiyey. Eebaha soo bixiya Daaqa. Kana dhiga markaas ka dib caws ingagagan oo Madow.
Suurat al-Aclaa 87:1-5
Sidoo kale Eebe waxa uu bini aadam ka raba inaay sharciga racan sida sharcigii Muuse oo kale.
Sidaas daraaddeed wax yar ka dib markii uu Masar ka tagay, Muuse (NNKH) oo reer binu Israa’iil Buur Siinay ka soo degay. Muuse (NNKH) buurta fuulay 40 maalmood si uu u helo Sharci ah. Quraanka waxaa loola jeedaa tan ayaadkan soo socda.
Xusa markaan idinka qaadnay ballan (adag) oo korkiina yeelay (buurta) dhuur oon idinku nidhi ku qaata waxaan idinsiinay niyad adag, xusuustana waxa ku sugan, si aad u dhawrsataan. Surat Al- Baqarah 2:63
Waxaan u yaboohnay Nabi Muuse Soddon habeen waxaana ku dhamaystirray Toban, wuxuuna ku dhamaaday Ballankii Eebihiis Afartan Habeen, wuxuuna ku yidhi Nabi Muuse Walaalkiis Haaruun iiga dambee Qoomkayga Wanaajina hana raacin Jidka Mufsidiinta.
Surat Al-Acraaf 7:142
Sidaas daraaddeed muxuu ahaa Sharciga Muuse (NNKH) loo soo dhiibay? In kastoo sharciga dhameystiran ahaa mid dheer (613 amarr inay go’aan ka gaarto waxa la oggol yahay iyo waxa aan la oggolayn – sida xeerarka ku saabsan waxa la xaaraameeyay iyo waxa xalaal ah) iyo ammarraddan, kuwaasoo inta badan Tawreedka ku salaysan, markii hore wuxuu helay qaybo ka mid ah ammarradda Ilaah oo qoraal ah kuna qoran loox dhagax ah. Kuwan waxaa loo yaqaan Tobanka Ammar, oo wuxuu noqday aasaaskii dhamaan xeerarka kale oo dhan. Toban Kuwaasuna waxay ahaayeen daruuriga buuxa ee Sharciga – shuruudaha kale oo dhan hortooda. Quraanka waxaa loola jeedaa halkan ayaadka (taasoo ka mid ah kuwa hoos ku soo socda)
Waxaan ugu qorray alwaaxda wax kastoo wacdi iyo cadayna, ee ku qaado Niyadadag farta Qoomkaaga inay qaataan, ha qaataan Teeda Fiicane. Waxaan idin tusin Guryihii faasiqiinta. Waxaan ka Iilaa Aayaadkaaga kuwa isku Kibriya Dhulka Xaq darro, hadday arkaan Aayaad kasta ma Rumeeyaan hadday arkaan Jidka Hanuunka kama Yeeshaan Waddo, hadday Arkaan Waddada Baadidana waxay ka yeeshaan Jid, waxaana ugu Wacan inay Beeniyeen Aayaadkanaga oy ahaayeen kuwo Halmaamay.
Surat Al-Acraaf 7:145-146
Quraanka waxa uu leeyahay Tobanka Ammar loox dhagax ah ku qoran ahaayeen calaamooyinkii Ilaah isaga qudhiisa ka yimid. Laakiin maxay ahaayeen ammarradani? Waxaa halkan lagu soo bandhigayaa dhab ahaantii ka yimid Buuggii Baxniintii Tawreedka Muuse (NNKH) lagana sameeyey Alwaaxdii. (Waxaan kuugu dari doonaa tirada oo keliya si aad u tirin kartid ammarrada)
Markaasaa Rabbigu erayadan oo dhan ku hadlay, isagoo leh,
“Anigu waxaan ahay Rabbiga Ilaahaaga ah, oo kaa soo bixiyey dalkii Masar iyo gurigii addoonsiga.
1 Aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaanad lahaan.
2 Waa inaanad samaysan sanam xardhan, ama wax u eg waxa samada sare jira, ama waxa dhulka hoose jira, ama waxa biyaha dhulka ka hooseeya ku jira. 5 Waa inaanad iyaga u sujuudin, ama u adeegin, waayo, aniga oo ah Rabbiga Ilaahaaga ah waxaan ahay Ilaah masayr ah, oo xumaantii awowayaasha waxaan soo gaadhsiinayaa carruurtooda tan iyo farcanka saddexaad iyo kan afraad oo kuwa i neceb, 6 oo waxaan u naxariistaa kumanyaal ah kuwa i jecel oo amarradayda xajiya.
3 Waa inaanad magaca Rabbiga Ilaahaaga ah si been ah ugu hadal qaadin, waayo, Rabbigu eedlaawe u haysan maayo kii magiciisa si been ah ugu hadal qaada.
4 Xusuuso maalinta sabtida, inaad quduus ka dhigto. 9 Lix maalmood waa inaad hawshootaa, oo aad shuqulkaaga oo dhan qabsataa, 10 laakiinse maalinta toddobaad waa maalin sabti u ah Rabbiga Ilaahaaga ah, oo waa inaanad shuqul qaban, adiga, ama wiilkaaga, ama gabadhaada, ama addoonkaaga, ama addoontaada, ama xoolahaaga, ama qariibka irdahaaga ku jira; 11 waayo, Rabbigu lix maalmood buu ku sameeyey samada, iyo dhulka, iyo badda, iyo waxa dhexdooda ku jira oo dhan, kolkaasuu nastay maalintii toddobaad, sidaas daraaddeed ayaa Rabbigu u barakeeyey maalintii sabtida ahayd oo quduus uga dhigay.
5 Aabbahaa iyo hooyadaa maamuus, in cimrigaagu ku dheeraado dhulka Rabbiga Ilaahaaga ahu ku siiyo.
6 Waa inaanad qudh gooyn.
7 Waa inaanad sinaysan.
8 Waa inaanad waxba xadin.
9 Waa inaanad deriskaaga marag been ah ku furin.
10 Waa inaanad damcin guriga deriskaaga, waa inaanad damcin naagta deriskaaga, ama addoonkiisa, ama addoontiisa, ama dibigiisa, ama dameerkiisa, ama waxa deriskaagu leeyahay oo dhan.
Oo dadkii oo dhammuna way wada arkeen onkodkii iyo hillaacii, iyo codkii buunka, iyo buurtii qiiqaysay; oo markii dadkii arkay ayay gariireen, oo meel fog istaageen.”
Baxniintii 20: 1-18
Inta badan waxa ay u muuqataa in dad badan oo naga mid ah oo ku nool dalalka cilmaani iloobeen in kuwanu waxay ahaayeen ammarradiisa. Iyagu ma ay ahayn talooyin. Iyagu ma ay ahayn talo bixin. Iyagu ma ay ahayn gorgortan. Waxay ahaayeen ammaro loo baahan yahay in loo ahaado mudeec – In ay soo gudbiyaan si ay u raacaan. Waxay ahayd shareecada. Oo reer binu Israa’iil waxay ku jireen cabsidda quduusnimadda Ilaah.
Dhaqanka la aqbali karo ee mudeecnimo
Suurat al-Xashr (Surah 59 – Mastaafuriis) Waxay tixraacda sida Tobanka Amar oo kale taas marka la barbar dhigo Quraanka sida uu sheegay. Sida uu Quranku sheegay Toban ka Amar ee lagu soo dejiyeey Nabi Muuse waxa ay aheyd buur aad looga argagaxayo.
Haddii quraankan Eebe Buur ku dejiyo (kula hadlo) waxaad arki lahayd Buurtii oo khushuucsan oo dillaaci cabsi Eebe darteed, saasaa Eebe mataallo ugu sheega dadka inay fikiraan darteed. Eebe mooyee Ilaah kale ma jiro, waxa maqan iyo waxa joogaba waa ogyahay, waana kan naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista.
Suurat al-Xashr 59:21-22
Laakiin su’aal muhiim ah ayaa weli hadhsan. Intee in le’eg ama intee ammaro ayeey ahaayeen in ay raacaan? Qaybahan soo socda waxay soo dageen in yar ka hor Bixinta Tobanka Ammar
…oo ay yimaadeen cidladii Siinay ayay teendhooyinkoodii cidladii ka dhisteen, oo reer binu Israa’iil halkaasay degeen buurta horteeda. 3 Muusena kor buu ugu tegey Ilaah, markaasaa Rabbigu buurta uga yeedhay isagii, oo wuxuu ku yidhi, Yacquub reerkiisa waxaad ku tidhaahdaa sidan, reer binu Israa’iilna ku dheh, 4 Idinku waad aragteen wixii aan ku sameeyey Masriyiintii, iyo sidii aan idiinku soo qaaday gorgorro baalashood, oo aan idiin soo kaxaystay. 5 Haddaba sidaas daraaddeed, haddaad daacad ahaan ii addeecaysaan, oo aad axdigayga dhawraysaan, de markaas waxaad ahaan doontaan dad hanti iiga ah dadyowga oo dhan, waayo, dhulka oo dhan anigaa iska leh.
Baxniintii 19: 2-5
Oo qaybtan waxaa la soo dejiyey oo kaliya ka dib markii Tobanka Ammar
Markaasuu (Muuse) wuxuu qaaday kitaabkii axdiga, oo wuuna akhriyey iyadoo ay dadkii maqlayaan. Oo waxay yidhaahdeen, “Kulli wixii Rabbigu ku hadlay waannu yeeli doonnaa oo waannu addeeci doonnaa.”
buugga uga dambeeya ee Tawreedka (waxay yihiin shan) taasoo ah fariin ugu dambaysay ee Muuse, ayuu soo koobay addeecnimada sharciga sidatan.
Rabbigu waa nagu amray inaannu samayno qaynuunnadan oo dhan oo aannu wanaaggayaga aawadiis weligayo uga cabsanno Rabbiga Ilaahayaga ah, inuu nolosha noogu daayo siday maanta tahay. 25 Oo waxay inoo ahaanaysaa xaqnimo haddaynu dhawrno oo aynu amarkan oo dhan ku samayno Rabbiga Ilaaheenna ah hortiisa, siduu inoogu amray, in xaqnimo aannu leennahay noqon doonaa.
Sharciga Kunoqoshadiisa 6: 24-25
Halkan muuqataa eraygan ‘xaqnimo’ mar kale. Waa erey aad muhiim u ah. marka hore waxaan ku arkay Calaamaddii Aadan markii Ilaah ku yidhi Caruurtii Aadan (naga!):
“Banii aadanoow! Waxaan idiin soo dejinay dhar astura xumaantiina (Cawrada) iyo labis (xarago) dharka dhawrsashada yaase khayr roon, kaasina waa Aayaadka Eebe inay dadku wax xusuustaan” [Sura t Al-Acraaf 7:26]
Haddaba, waxaan ku aragnay in Calaamadii 2 ee Ibraahim markii Ilaah isaga wiil u ballanqaaday, iyo Ibraahim (NNKH) uu aaminay ballanqaadkii oo waxaa ka dibna oranayaa
Oo Rabbiga wuu rumaystay; Ilaahna taas wuxuu ugu tiriyey xaqnimo.
(Fadlan arag Calaamada 2 ee Ibraahim sharaxaadeedda buuxda ee xaqnimadda).
Haddaba halkan iyada oo loo marayo sharciga waa waddada lagu heli karayo xaqnimadda maxaa yeelay sida uu leeyahay
“haddii aynu nahay si taxaddar leh u hogaansamo sharciga oo dhan taas … in inoo ahaanaysaa xaqnimodoon”
Sharciga Kunoqoshadiisa 6:25
Laakiin xaalada inaad xaqnimo helnaa waa mid daran. Waxa uu leeyahay waxaan u baahan nahay in ‘aan mudeec u ahaano sharcgaan oo dhan‘ ka dibna kaliya aan helno xaqnimo. Tani waxay ina xusuusinaysaa Calaamadda Aadan. Waxay qaadatay hal fal oo caasinimo ah keliya in Ilaah uu xukumo oo iyaga ka soo saaro Jannada. Ilaah ma uusan sugin dhowr jeer falal caasinimo oo ay ku kacaan. Waa isku mid xaaskii Luudh Calaamadda Luudh. Si aad u caawisaa dhab ahaantiina fahamtaan halista ay leedahay tani Waxaan ku lifaaqay halkan qaybahan badan ee Tawreedka ah in ay ku adkaysato in heerkan saxda ah ee addeecidda idiin kaxaysa xagga Sharciga ee loo baahan yahay.
Ina keena aynu ka fikirnee waxa taasi ka dhigan tahay. Mararka qaarkood koorsooyinkii jaamacadda aan ka soo qaatay, professorku waxa uu na siiyaa su’aalo badan (Tusaale ahaan 25 su’aalaha) imtixaankana oo markaas loo baahan yahay oo kaliya qaar ka mid ah su’aalaha aan ka doorano si aan uga jawaabno. Sidaas awgeed, waan kari karnaa, tusaale ahaan, dooro 20 su’aalood oo ka mid ah 25 ka su’aalood si aad uga jawaabto imtixaanka. Sidaas waxaa laga yaabaa in qof uu u arko hal su’aal mid aad u adag oo uu dooran karaa in uu ka boodo su’aashaas laakiin arday kalena uu ka heli karo su’aal kale mid ku adag oo uu ka gudbi doono su’aashaan. Ay saamayn doonaa, waxa keliya oo aan samaynaynaa 20 ka mid ah 25 ka su’aalood ee aan ka doorano. Sidan professorka ayaa ka dhigay imtixaanka mid inoo sahlan.
Dadka badankooda ayaa la sima Tobanka Ammar ee Sharciga si la mid ah. Waxay u malayn in Ilaah, ka dib markuu siiyay Tobanka Ammar, loogu tala galay, “Iskudayga shan ka mid ah doorashadaada Tobankan”. Laakiin maya, tani ma ahan sida la siiyey. Waxay ahaayeen in ay fuliyaan oo ay raacaan DHAMAAN qaynuunnadii, ma ahan oo keliya qaar ka mid ah oo noqdaan dookhooda. Kaliya in ay ilaaliyaa Sharciga oo dhan waxay ka dhigan tahay in ‘noqday xaqnimadooda.
Laakiin maxaad dadka qaar Sharciga daweeyaan sidan oo kale? Maxaa yeelay, sharcigu waa mid aad u adag in la raaco, gaar ahaan tan iyo markii tani ma ahan oo kaliya maalin qudha laakiin ay tahay noloshaada oo dhan. Sidaas darteed waa ay fududahay in aan khiyaano nafteena iyo aan hoos u dhigto qawaaniinta. Fadlan hubi ammarradiisa mar kale iyo adigoo naftaada weydiinaaya, “Oo ma dhawri karaa kuwaan? Dhamaantood? Maalin walba? Aannan ku guuldareysanaynin?” Sababta aan u baahanahay in aan su’aashan weydiinno nafteenna waa maxaa yeelay Tobanka Ammar ayaa weli jira oo loo baahan yahay in aan samayno. Ilaah ma joojin iyaga xitaa sida nebiyada kale (Oo ay ku jiraan Nabi Ciise Masiix iyo Nabi Maxamed –NNKH – eeg halkan) ay yimaadeen ka dib markii Muuse (NNKH). Tan iyo kuwanu waa ammarradii aasaasiga ahaa oo la xaajoonaya sannamyadda, caabudidda Ilaah keli ahaantiis, sinaysanin, xadin, dilin, been sheegin, iwm. Waxay yihiin wakhti aan xaddidnayn oo aan marnaba la burin karayn. Qofna ma uu uga jawaabi karto qof kale – wuxuu uun u jawaabi karaa nafsaddiisa keliya. Oo isna wuxuu u jawaabi doonaa Maalinta Qiyaamaha Ilaaheey hortiis. “Ma aan u xajiyey ammarradii si buuxda?”
Dhamaan – muhiimadda Su’aasha Ilaah hortiis
Sidaas daraaddeed waxaan waydiin doonaa su’aal, fududayn doonaa dhinaca Sharciga Kunoqoshadiisa 6:25 sidaas awgeed waa mid shakhsi ah oo waad ka jawaabi kartaa naftaada. Iyadoo ku xidhan sida aad uga jawaabto bayaankan sharciga ku salaysan, Sharciga oo u dhaqma siyaabo kala duwan. Sidaas aawadeed si taxadar leh u malee oo ka dibna dooro jawaabta aad u malaynayso in aad tahay mid run adiga kaa sheegaysa. Riix jawaabta ku khusaysa.
Rabbigu wuxuu igu amray inaan qaynuunnadayda oo dhan iyo cabsanno Rabbiga Ilaahayaga ah, oo sidaas daraaddeed anigu had iyo liibaani laga yaabo oo lagu hayn nool, sida uu yahay kiiska maanta. Oo waxaan ahaa si taxaddar leh u hogaansamo sharcigaas oo dhan Rabbiga Ilaahiinna ah hortiisa, siduu igu amray, iyo in ay xaqnimadaydii ahayd noqon doonaa.”
Haa – tani waa run anniga ah.
Maya – anigu ma aannan addeecin dhamaan iyo taasoo tani aysan run anniga iga sheegaynin.
Tags:10 amarradiisaamarrada Tawreedin Tawreed Toban amarradiisaka loox oo dhagax ahMusa Buur Siinayoo ah tobanka qaynuunoo ah tobanka qaynuun of MusaSharciga on Kiniinigasharciga shareecada Musasharciga shareecada Muuseshareecada MuuseSuurat Al- AclaaSuurat al-Xashr
1 thought on “Calaamadda 2 ee Muuse: Sharciga”
xuseen Xasan 14/09/2016 at 7:13 am
Nin Diintii Nabi Muxamed haystay oo ah khaatim al anbiyaa wal mursaliin oo haysta quraanka kariimka ah oo uu ku dhanyahay dhammaan kutubtii Ilaah soo dajiyay muxuu uga baahan yahay injiilka? waa waxba